အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ
ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ
အီရွန် ငွေပေးသွင်းရန် ကိုယ်စားလှယ်များ
စည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက်များ သုံးစွဲသူ ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
စည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက်များ အလုပ်အကိုင် အမေးများသော မေးခွန်းများ
အမေးများသော မေးခွန်းများ TMM account ဘယ်မှာလုပ်ရမလဲ ? TMM account ကို TMM ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင် အလွယ်တကူ မှတ်ပုံတင် စာရင်းသွင်းပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ TMM account လုပ်ရင်ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ ? TMM account ပြုလုပ်ရန် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်။ TMM account လုပ်လျင် ဘယ်လောက်ကြာနိုင်သလဲ ? TMM account ကိုယ်စားလှယ်ထံတွင် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် TMM account ကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ TMM account နဲ့ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ? TMM တွင် ရှိသော ၀န်ဆောင်မှုများအားလုံးကို TMM account ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ TMM account ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရလဲ ? TMM account ကို TMM ကိုယ်စားလှယ်များရှိရာ နေရာတိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ TMM account ၀န်ဆောင်မှုတို့နဲ့ ပါတ်သက်လို့ အဆင်မပြေခြင်းရှိလျင် ဘယ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရနိုင်မလဲ ? TMM account ၀န်ဆောင်မှုတို့နဲ့ ပါတ်သက်လို့ အဆင်မပြေခြင်းရှိလျင် Call Center ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀၁-၂၃၀-၅၃၆၀ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ TMM account မရှိသေးရင် ငွေလွှဲလို့ အဆင်ပြေနိုင်မလား ? TMM account မရှိသေးလျင်လည်း ငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ TMM account က လုံခြုံ စိတ်ချရမှာလား ? TMM account သည် လုံခြုံစိတ်ချရပါသည်။ အသုံးပြုရာတွင် လက်ဗွေရာဖြင့် အသုံးပြုရသောကြောင့် မိမိ၏ account ကို အခြားသူများ အသုံးပြုမရပါ။ Account ပျောက်ပျက်သွားခဲ့လျင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ ? Account ပျောက်ပျက်သွားခဲ့လျင် truemoney သို့ ချက်ခြင်း အကြောင်းကြားပါ။ TMM သုံးပြီး ငွေလွှဲလျင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲ ၊ ငွေလွှဲပြီးကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ? TMM သုံးပြီး ငွေလွှဲရန် အချိန်အနည်းငယ်သာ ကြာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေလွှဲမှု ပြီးစီးပါက ပြေစာဖြတ်ပိုင်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Local Remittance FAQ True Money နှင့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုနိုင်ပါပြီလား။ ဟုတ်ကဲ့၊ ရပါပြီ။ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု ရမည့် Agent ဖြစ်ရန် ဘယ်လောက်ရင်းနှီးရမည်နည်း။ လုပ်ငန်းရင်းနှီးလည်ပတ်ငွေဖြင့်စတင်လို့ရပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ငွေပမာဏရင်းနှီးလိုက်ပြီး Agent ဖြစ်ပါက ဘာတွေလုပ်ဆောင်လို့ရပါမည်နည်း။ ထိုကဲ့သို့ ရင်းနှီးလိုက်ပါက Top Up (ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း)၊ ပြည်တွင်း (ငွေလွှဲခြင်း) များနှင့် Bill Payment(ငွေပေးချေခြင်း) ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Agent ဖြစ်ချင်ပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ Agent ဖြစ်ချင်ပါက ကုမ္ပဏီ hotline 01-2305360 သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ TrueMoney Website မှ တဆင့် Agent Form ဖြည့်၍သော်လည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် / လိုင်စင် ၊ အမည် ၊ မှတ်ပုံတင် ၊ နေရပ်လိပ်စာ ၊ AGD+ TrueMoney Agent Agreement စာချုပ်အတွက် လိုင်စင် ရောင်စုံဓာတ်ပုံ (၁) ပုံ လိုအပ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းထံသို့ (၃)ရက်အတွင်း လာရောက် စစ်ဆေးပေးပါမည်။ Agent ဖြစ်ကြောင်းကို အကြောင်းကြားပြီး ၊ အရောင်းဋ္ဌာနမှ ၀န်ထမ်းများက POS နှင့်အတူ လူကြီးမင်းအား လာရောက်သင်ကြား ပြသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Refill (ငွေပြန်ဖြည့်) လုပ်လိုလျှင်မည်သို့ ဆောင်ရွှက်ရမည်နည်း။ Refill လုပ်လိုပါက ဘဏ်ကတစ်ဆင့် လွှဲလို့ရပါသည်။ ငွေလွှဲမည့်သူသည် ငွေလွှဲပါက Agent အနေဖြင့် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ (Agent Side)
Agent အနေဖြင့် ငွေလွှဲမည့်သူထံက ငွေရပါက TrueMoney POS စက်ဖြင့် စလစ်ထုတ် ပေးပါမည်။ စက်မှ Agent စလစ်နှင့် ငွေလွှဲသူ အတွက် စလစ်နှစ်ခု ထွက်လာပါမည်။ ငွေလွှဲသူ စလစ်တွင် Pass code နှင့် ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ ဖုန်းနံပါတ် ပါရှိပါမည်။ Agent စလစ်တွင် ငွေလွှဲသူ၏ ဖုန်းနံပါတ် ပါရှိပါမည်။ ငွေလွှဲသူကို ပြေစာ ပေးရပါမည်။ ငွေလွှဲမည့်သူသည် Agent ထံတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ ( Customer Side)
ငွေလွှဲမည့်သူသည် လွှဲမည့်ငွေနှင့် ငွေလွှဲခ ကို Agent သို့ပေးပြီးလျှင် KYC Form ဖြည့်ရပါမည်။ စလစ်တွင် pass code (၈)လုံးနဲ့ ငွေလက်ခံမည့်သူ၏ ဖုန်းနံပါတ်ပါရှိပါမည်။ ငွေလက်ခံသူကို passcode no. ပို့ပေးရပါမည်။ Agent ဆီမှ ငွေရပြေစာအားရယူရပါမည်။ ငွေလက်ခံ မည့်သူသည် Agent ထံတွင် မည်သို့ ထုတ်ယူရမည်နည်း။ ငွေလက်ခံမည့်သူသည် ငွေလွှဲသူထံမှ passcode တောင်းယူ၍ ငွေထုတ်ယူရရှိနိုင်သည့် နီးစပ်ရာ AGD+True Money Agent Logo ရှိသည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို passcode, phone No. နှင့်အတူ လိုအပ်သောဖောင်ဖြည့်၍ ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ Passcode သက်တမ်း (၁) ပတ် ဖြစ်ပါသည်။ ငွေလွှဲသူ၏ Passcode ပျောက်သွားပါက ချက်ချင်း အကြောင်းပေး ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ငွေလက်ခံသူက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မထုတ်ခဲ့သည်ရှိသော် ငွေလွှဲသူ၏ လွှဲငွေနှင့် Ph Number အား (၅) လ အထိ သိမ်းထားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ငွေအနည်းဆုံး ဘယ်လောက်ကစ လွှဲလို့ရမည်နည်း။ အနည်းဆုံး (၁,၀၀၀) ကျပ်မှ စလွှဲလို့ရပါသည်။ ငွေအများဆုံးဘယ်လောက်အထိလွှဲလို့ရမည်နည်း။ တစ်ရက်လျင် အများဆုံး ၁၀ သိန်းအထိလွှဲလို့ရပါသည်။ Customer အနေဖြင့် ငွေလွှဲခ ဘယ်လောက်ပေးရမည်နည်း။ ၁၀၀၀ ကျပ်မှ ၁ သိန်း ကျပ်အထိ ငွေလွှဲခ - (၆၅၀) ကျပ် ။ ၁ သိန်း ကျပ်မှ ၃ သိန်း ကျပ်အထိ ငွေလွှဲခ - (၁,၃၀၀) ကျပ်။ ၃ သိန်း ကျပ်မှ ၇ သိန်း ကျပ်အထိ ငွေလွှဲခ - (၂,၃၀၀) ကျပ်။ ၇ သိန်း ကျပ်မှ ၁၀ သိန်း ကျပ်အထိ ငွေလွှဲခ - (၃,၃၀၀) ကျပ် Agent အဖြစ်မှရုတ်သိမ်းလိုပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ ကုမ္ပဏီသို့အကြောင်းကြားရပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများလာရောက်၍ POS စက် နှင့် ငွေလက်ကျန်အား စစ်ဆေးပြီး Agent Agreement စာချုပ်နှင့် POS အား ပြန်လည်သိမ်း ဆည်းသွားပါမည်။ POS စက်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပါက စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာငွေကြေးဋ္ဌာနမှစစ်ဆေးပြီးနောက်စရံငွေနှင့်တကွပြန်လည်ရှင်းလင်း ပေးပါမည်။ လုပ်ဆောင်ချိန် (၂)ပတ်ကြာမည် ဖြစ်ပါသည်။
(အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက TrueMoney Call Center 01-2305360 ext0သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။) ကုမ္ပဏီ TrueMoney ဆက်သွယ်ရန် သတင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ အခွင့်အလမ်း အလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှုများ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အကူအညီ ပင်မစာမျက်နှာ အမေးများသောမေးခွန်းများ TMM အကောင့် © 2015 TrueMoney Myanmar Co., Ltd.